IMO: Burcad-badeeddu waxa ay dhaqaalaha caalamka ku kalliftaa 12 bilyan oo doollar sannadkii. – Radio Daljir
IMO: Burcad-badeeddu waxa ay dhaqaalaha caalamka ku kalliftaa 12 bilyan oo doollar sannadkii.
Luulyo 31, 2011 12:00 b 0
London, July 31 – Hay’adda Caalamiga ah ee Howlaha Badaha iyo Maraakiibta ayaa sheegay in burcad-badeeddu ku kallifto dhaqaalaha caalamka adduun lagu qiyaasay inta u dhexeeysa 7 illaa 12 bilyan oo doollarka Maraykanka ah sannadkiiba.
Sida ay hay’addaasi, oo magaceeda loo soo gaabiyo IMO ay sheegtay, waxaa lixdii bilood ee ugu horeeysay sannadkan 2011-ka sare u kacay, oo heer aan horay loo arag gaaray, weerarada burcad-badeedda Soomaalida ahi ka fuliyaan Gacanka Cadmeed iyo Bad-waynta Hindiya oo baaxad ahaan le’eg qaaradda Yurub. Sida ay muujinayso warbixintu, weerarada ayaa gaaray 187 weerar, halka intii u dhexeeysa muddadaasna la af-duubtay 22 markab.
Hay’adda IMO ee ka shaqeysa howlaha badaha iyo maraakiibtu waxa ay sidoo kale sheegtay in dagaalka ka socda Liibiya ee u dhexeeya Mucamar Al-Qaddafi iyo kooxaha la diriraya ay sababeen in maraakiibtii ilaalada ka hayay xeebaha Soomaaliya iyo burcad-badeeda ay awooddii u wareejiyeen dalkaas.
Xog-hayaha Guud ee IMO, Efthimios Mitroplulos ayaa shir uu ku London kaga qayb-galay isaga oo ka hadlaya wuxuu yiri “Waa in aynu noqonaa waaqiyiin oo aan aqbalnaa isla markaana fahamnaa in maraakiibtii dagaalka ee aan heli karnay si ay gacan uga gaystaan la dagaallanka burcad-badeeddu haatan loo jiheeyn doono sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen colaadaha ka socda Libiya.”
Mr. Mirtopoulus ayaa waxa uu sheegay in codsigiisii uu u diray xog-hayaha guud ee NATO Anders Fogh Rasmussen bishii February ee sannadkan 2011-ka uu ku soo beegmay xilli xun oo ah markii ay kacdoomada siyaasadeed ka biloowdeen Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
“La iguma war-galin wax siyaadin ah oo loo sameeyay maraakiibta dagaal ee diyaarka u ah xeebaha kulaala Soomaaliya tan iyo xilligii ay kacdoonnadu biloowdeen” ayuu yiri madaxa hay’adda IMO ee howlaha badaha iyo maraakiibta caalamiga ah.
Taliyaha howl-gallada ciidamada badda ee Midowga Yurub ee jooga xeebaha Soomaaliya Sareeye Guuto Buster Howes ayaa ka sheegay dhagaysi ka dhacay barlamaanka boqortooyada Ingiriiska 22-kii bishii June in is-bahaysi ciidamo badeed ah oo ka socda NATO, Midowga Yurub iyo Maryakanku ay ku sugnaayeen Bad-waynta Hindiya iyo Gacanka Cadmeed si ay u ilaaliyaan biyo baaxaddoodu gaarayaan 2 milyan iyo lix boqol oo kun oo mitir oo isku wareeg ah.
Waxa uu intaa ku daray in mandiqaddaasi ay marin u tahay 23 kun oo markab iyo badeeco ganacsi oo ku qiimaysan 1 tiriliyan ama kun bilyan oo doollarka Maraykanka ah sannadkiiba.
Nin xalay lagu dilay Garoowe xilli la isku diyaarinayay xuska 13 guurada Puntland
Garoowe oo si wayn loogu diyaar-garoobayo xuska sannad-guurada 13-aad ee 1-da Ogoosto.